Siyaasadda cookie | MyCoolClass
Diiwaangelinta Ardayda cusub
Cookie waa xog yar oo xog ah (feyl qoraal ah) oo degel - markii uu booqdo adeegsade - ka codsado biraawsarkaaga inuu ku keydiyo qalabkaaga si loo xasuusto macluumaadka adiga kugu saabsan, sida doorbidista luqaddaada ama macluumaadka gelitaanka. Kukiyadaas annaga ayaa dejinay oo loo yaqaan 'cookies-first-cookies'. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa cookies-ka saddexaad - kuwaas oo ah cookies ka soo jeeda domain ka duwan domainka bogga aad booqanayso - dadaalkeena xayeysiinta iyo suuqgeynta.
Waxaan u isticmaalnaa buskudka sababo dhowr ah
si loogu shaqeeyo qaybaha muhiimka ah ee shabakada MyCoolClass,
Waa inaad ku aqriso Nidaamkan Kukiyada shuruudaha iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Si loo analysie caan ah fasalada iyo koorsooyinka
Soo dejiso faylka PDF
Macallinkaaga Ha Ku Sugin ...Ballanso Casharka DEMO BILAASH AH Maanta!
1. Samee Xisaab Xor ah
2. Hel Macallinkaaga
3. Bilow Barashada
Websaydaan wuxuu isticmaalaa cookies
Waxaan u isticmaalnaa kukiyada websaytkayaga si aan kuu siino waayo -aragnimada ugu habboon annagoo xusuusan dookhyadaada iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Adigoo gujinaya "Aqbal Dhammaan", waxaad oggolaatay adeegsiga dhammaan cookies -ka. Read MoreQalabka cookie-kaAqbal Dhamaan
_gat 1 daqiiqadii Buskudkan waxaa lagu rakibay Google Universal Analytics si loo xakameeyo heerka codsiga sidaasna loo xaddido ururinta xogta goobaha taraafigga ee sarreeya.
_gid maalin 1 Waxaa rakibay Google Analytics, _gid cookie wuxuu kaydiyaa macluumaadka ku saabsan sida booqdayaashu u adeegsadaan degel, halka ay sidoo kale abuurayaan warbixinta falanqaynta waxqabadka mareegaha. Qaar ka mid ah xogta la uruuriyay waxaa ka mid ah tirada booqdayaasha, isha ay ka yimaadeen, iyo bogagga ay booqdaan si qarsoodi ah.
cookielawinfo-checkbox-shaqeynaya sano 1 Kukiyada waxaa dejiya oggolaanshaha cookie-ka ee GDPR si ay u diiwaangeliso oggolaanshaha isticmaalaha ee kuukisyada ku jira qaybta "Waxqabadka".